चेपाङ बालबालिकाको लागि छात्रावास निर्माण गरिने - नेपालबहस
चेपाङ बालबालिकाको लागि छात्रावास निर्माण गरिने
| १४:०५:१७ मा प्रकाशित
२१ जेठ,चितवन । चितवनमा सीमान्तकृत चेपाङ समुदायका बालबालिकाको लागि छात्रावास बन्न लागेको छ । कालिका नगरपालिकाले आवासीय रुपमा अध्ययन सुविधा दिन थप दुई स्थानमा छात्रावास निर्माण गरिरहेको हो ।
नगरपालिकाले पहाडी क्षेत्रमा पर्ने वडा नं १० को मझवाङ मावि र वडा नं ९ को चतुर्मुखी माविमा प्रजा ९चेपाङ० छात्रावास निर्माण गरिरहेको छ । नगरपालिकाका इन्जिनीयर राजेश कोइरालाका अनुसार मझवाङ माविमा ५० जनासम्म विद्यार्थी बस्न सक्ने गरी छात्रावास निर्माण थालिएको हो । हरेक तलामा तीनवटा शौचालय र स्नान कक्ष रहने छन् । खाना पकाउने, खाने, अध्ययन गर्ने कोठाहरु समेत छुट्टाछुट्टै हुने उनले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा एकतले उक्त छात्रावास निर्माण सम्पन्न भएपछि १६ जना विद्यार्थीले आवासीय सुविधा पाउने छन् । तीन तला निर्माण गर्न मिल्ने गरी भवन निर्माण गरिएको छ । उनले भने “तीन तला निर्माण सम्पन्न भएपछि ५० जना विद्यार्थीले सुविधा पाउँछन् ।” पहिलो तलाको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो तलाका लागि रु।८३ लाख १० हजार ८४१ मा ठेक्का दिइएको हो । असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।
मजबाङ मावि सिद्धीमा पनि २० जना क्षमताको छात्रावास सञ्चालनमा छ । यहाँ सीमान्तकृत चेपाङ समुदायका बालबालिका बस्ने गर्दछन् । सिद्धीको छात्रावास धेरै पहिलेदेखि सञ्चालनमा छ । सो विद्यालयमा नयाँ भवन बनेसँगै छात्रावास सहज रुपमा सञ्चालन हुनेछ । श्रेष्ठले भने, “चतुर्मुखीको छात्रावासबाट अध्ययन गरेर ४०० भन्दा बढीले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेर उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् ।” नगरपालिकामा त्यही अध्ययन गरेका पाँच जनाले रोजगारी पाएको उनले जानकारी दिए ।
नयाँ भवनहरु बनेसँगै थप विद्यार्थीलाई राखेर अध्ययन गराउने उनको भनाइ छ । आउँदो दशैंसम्ममा नयाँ भवनहरुमा विद्यार्थी राख्ने योजना नगरपालिकाको छ । यही असारसम्म भवन निर्माण सम्पन्न लक्ष्य लिइएको भए पनि कोभिडका कारण तत्काल विद्यार्थी राख्ने अवस्था छैन । चेपाङ पछाडि परेको समुदाय हो । पहाडी भूभागमा वसोवास गर्ने चेपाङहरुको बाह्रै महिना खाना पुग्ने उब्जनी हुँदैन । कतिपय समयमा गिठाभ्याकुर खाएर जीविकोपार्जन गर्ने गर्दछन् ।
नेपाल इन्स्योरेन्सको शेयरमा ३ लाख १७ हजार कित्ता खरीद माग २ मिनेट पहिले
रिलायबल नेपाल लाइफको आईपीओ रेटिङ सम्पन्न १८ मिनेट पहिले
यी हुन् माओवादी केन्द्रबाट निश्काशित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु २५ मिनेट पहिले
आज बजारमा कतिमा भइरहेको छ सुनको कारोबार ? ३४ मिनेट पहिले
राइफल पड्किएर ड्युटीमै रहेका सेनाका जवान घाइते ४१ मिनेट पहिले
रक्तचापको श्रेणी कसरी थाहा पाउने ? ४७ मिनेट पहिले
तुलसीपुर बजारमा छाडा छोडिएका चौपाय ५५ मिनेट पहिले
ईन्सुलीन लिदै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहाेस यी कुराहरू ५६ मिनेट पहिले
धिताेपत्र बोर्डको ‘एक्सन’ पछि बजारमा आएको पहिरो रोकिएन ५८ मिनेट पहिले
पहिरो पन्छाएर मर्मतका लागि श्रमदान गर्दै ५८ मिनेट पहिले
बाढीले दोलालघाट पुरानो बजार क्षेत्रका ११ घर डुबानमा ३ दिन पहिले
अवैध रुपमा सालको काठ चोरी निकासी गर्ने चार जना नियन्त्रणमा ३ दिन पहिले
मोरङमा दुईसय परिवारलाई घरघरमा खाद्यान्न वितरण गर्दै २ हप्ता पहिले
सत्यवती तालसम्म पुग्न केवलकार जडानको तयारी ७ दिन पहिले
गृहमन्त्री अधिकारीद्वारा ७ वटै प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरुलाई निर्देशन [ फोटोफिचर ] १ हप्ता पहिले
निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गर्न ३ जिल्लाका सीडीओको बैठक बस्दै १ हप्ता पहिले
अनुशासनविपरीत काम गर्ने हवल्दारसहित तीन प्रहरी निलम्बन ११ महिना पहिले
महालक्ष्मी विकास बैंकले संस्थापक शेयर हिस्सा ५२.४९ प्रतिशतलाई घटाएर ५१ प्रतिशतमा झार्ने ५ महिना पहिले
प्राधिकरणले पुनःस्थापना र पुन : निर्माणमा उपलब्धिबारे सेमिनार गर्ने ७ महिना पहिले
बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ ४ महिना पहिले